Y Cwtch - Ifulethi elisha elithandekayo - I-Airbnb
Y Cwtch - Ifulethi elisha elithandekayo
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Sara
Ifulethi elisha elizimele eceleni futhi elixhumene nengemuva lendlu ukuze lilale abantu abangu-2. Ukupaka okunendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela ngesango eliseceleni eliya efulethini elingemuva kwendlu. Izikhungo zasekhishini zihlanganisa ifriji, i-microwave, iketela, i-toaster kanye ne-shower/ indlu yangasese. Ibanga lemizuzu engu-10 nje yokuhamba ngezinyawo ukuya enkabeni yedolobha lase-Bridgend ukuze uthole iziteshi zesitimela nezamabhasi. I-Cardiff imizuzu engu-20/i-Swansea imizuzu engu-20. Amabhishi amahle nezindawo zeNtaba eziseduze kanye nendawo enhle yokudlala igalofu nokushayela.
Indawo yangasese futhi enokuthula, ilungele abantu ngabanye noma abantu abangu-2. Ngingakwazi futhi ukwamukela ingane/ingane futhi nginikeze indlwana yokuhamba uma kuceliwe.
Akukho UKUBHEMA EMAGCEKENI
4.93 · 230 okushiwo abanye
Lena indawo ethule kakhulu okwamanje eseduze nawo wonke amasevisi endawo kanye nezitolo ezifana ne-Coop, i-Tesco, i-Asda, i-Lidl nazo zonke izinhlobo zokuvakasha. Isikhungo Sezemidlalo esinendawo yokubhukuda uhambo lwemizuzu engu-10 kuphela. Kukhona namaphabhu ahamba ngemizuzu engu-5-10 ku-The Haywain ne-The Two Brewers.
Kujabulele ukuxoxa nezivakashi ngokwesidingo/kudingeka.